Ny governemanta Aostralia dia mizara vola ho an'ny hetsika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Ny governemanta Aostralia dia mizara vola ho an'ny hetsika
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Hetsika orinasa any Aostralia
Tahaka ny firenena maro hafa manerantany, ny indostrian'ny MICE dia nijaly noho ny fiantraikan'ny COVID-19. Miaraka amin'ny zara raha misy fitsangatsanganana rehetra sy olona ho an'ny ankamaroan'ny fialokalofana ao an-trano, dia nikatona ny indostrian'ny fivoriana sy ny hetsika, tsy misy fikasana.
Raha tsy misy ny fivoriana manokana, dia tsy ny toerana misy hetsika ihany no mijaly, fa ny fotodrafitrasa rehetra miaraka aminy, manomboka amin'ny hotely ka hatrany amin'ny fitaterana mankany amin'ny trano fisakafoanana mankany amin'ireo toerana fizahan-tany.
Ny Governemanta Federal Australia Andrefana dia manolotra programa momba ny fanomezana hetsika ho an'ny solontena sy mpanentana hanatrika hetsika ara-barotra.
Ny Programa momba ny hetsika ho an'ny hetsika ara-barotra dia ho fitaovana lehibe hanombohana ny sehatry ny hetsika any Aostralia Andrefana miaraka amin'ny fanampiana azo atao hatramin'ny 50 isanjaton'ny vidiny.
Talohan'ny nanombohan'ny valan'aretina COVID-19, ny sehatry ny hetsika orinasa any Aostralia dia tombanana ho $ 35 miliara ho an'ny fiantraikany ara-toekarena mivantana amin'ny toekarem-pirenena, miaraka amin'ny anjaran'ny Australia Andrefana izay mitentina eo amin'ny 2.5 miliara dolara.
Androany, fisehoan-draharaham-barotra 20 aostralianina tandrefana (WA) no nahatonga izany tamina fandaharam-potoana nankatoavina momba ny hetsika ara-barotra, izay azo ekena amin'ny Programa momba ny hetsika ho an'ny hetsika ara-barotra izay manolotra eo anelanelan'ny $ 10,000 sy $ 250,000 mba hanefana ny vidin'ny solontena sy ny mpanentana hanatrika sy hanatrika amin'ny hetsika efa nankatoavina mialoha.
Hetsika any amin'ny orinasa Hahazo an'io fampisondrotana tena ilaina io i Australia Andrefana miaraka amin'ny fanokafana ny fisoratana anarana ho an'ny Fandaharam-bola ho an'ny hetsika hetsika 50 tapitrisa dolara an'ny governemanta federaly. Ny Lehiben'ny Executive Business Event Perth Gareth Martin dia nanentana ireo mpampiranty sy solontena ao an-toerana mba hangataka famatsiam-bola, ary nilaza fa hanome fanampiana an-tsitrapo ny sehatry ny hetsika orinasa.
"Araka ny fantatsika rehetra fa ny areti-mandringana COVID dia niteraka fanamby goavana tamin'ny indostrian'ny hetsika ara-barotra, miaraka amin'ny famerana ny famoriana sy ny tsy fahafahan'ny mpitsidika iraisam-pirenena sy iraisam-pirenena tonga any WA, izay niteraka fanemorana sy fanafoanana ireo hetsika nandritra izay 12 volana lasa izay," hoy i Mr. Hoy i Martin.
"Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny vidin'ny mpividy sy ny mpivarotra hihaona, hifandray ary hiara-hiasa amin'ny hetsika fandraharahana, ity programa ity dia tsy manampy fotsiny amin'ny famerenana ny sehatry ny hetsika, fa manentana ny hetsika mihamitombo amin'ny sehatry ny famatsiana hetsika."
Nilaza Andriamatoa Martin fa ny fanohanana ny hetsika eo an-toerana dia hanana tombony lehibe.
“Ny hetsika ara-barotra dia mpamatsy vola lehibe amin'ny toekarena eo an-toerana miaraka amin'ny kaonferansa sy fampiratiana manome fotoana ho an'ny orinasa marobe ao an-toerana toy ny mpikarakara sakafo, mpaka sary, manakarama orinasa, mpiasa an-tsary sy miasa ary koa manintona mpitsidika manana vokatra be izay mijanona ao amin'ny hotely Perth , ary misakafo any amin'ny kafe sy trano fisakafoanana misy anay, ”hoy Andriamatoa Martin.
"Ny Programa momba ny hetsika ho an'ny hetsika ara-barotra dia ho fitaovana lehibe amin'ny fanombohana ny sehatry ny hetsika any Aostralia Andrefana, miaraka amin'ny fanomezana malala-tanana afaka mahatratra hatramin'ny 50 isan-jaton'ny vola lany amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika fandraharahana efa nekena."
Ny vatsim-pianarana dia misy amin'ny orinasa aostralianina handray anjara amin'ny maha-mpividy na mpivarotra amin'ny fampirantiana, fivoriambe ary fivoriambe natao talohan'ny 31 desambra 2021.
Misokatra ary hakatona ny fangatahana amin'ny 30 martsa amin'ny 5 hariva AEDT. Mametraha fangatahana Eto.
Raha hijery ny lisitry ny hetsika orinasa Aostraliana Andrefana nankatoavina, kitiho Eto.
Ny fanehoana fahalianana ho tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana nankatoavina momba ny hetsika ara-barotra dia mbola misokatra sy akaiky ny 26 febroary 2021. Azo jerena bebe kokoa ny fampahalalana momba ny vola Eto.
Nilaza Andriamatoa Martin fa Business Events Perth's Hetsika Eto Ankehitriny ny fampielezan-kevitra dia nanohana hetsika orinasa 110 teto an-toerana hatramin'ny nanombohany ny volana aogositra 2020.
"Amin'ny alàlan'ny hetsika eto amintsika izao, Business Events Perth dia manolotra hatramin'ny $ 30,000 ho fanohanana ireo hetsika eo an-toerana ary nahomby tokoa ity programa ity, izay nahitana solontena 56,000 mahery hifandray sy hiara-miasa," hoy Andriamatoa Martin.